Maxay dumarkan wejiga u marsadeen dhiigga caadada? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Renata Chebel para DanzaMedicina
Image caption Bisha taranka waxay waxay ku saleysan tahay caado dhaqamed soo jirtay, taas oo dhiigga caadada u arka astaanka wax soo saarka, sida ay sheegeen kuwa ku dhaqma.
Bil kasta, Laura Teixeira, waxay oogeysaa caado dhaqameedka "ku xiriirisa" dhulka.
Dhaqankan waxaa loo yaqaanaa "Bisha beerasha", waana soo jireen loogu talagalay in loo dabaaldego in dhiigga caadadu yahay astaanta muujineysa in haweeneydu ay carruur dhali karto.
Dumarka u hoggaansama dhaqanka waxay mid kastaa leedahay qaabkeeda u gaarka ah ee ay ugu dabaaldegto "Bisheeda", taas oo ay u arkaan in qof kastaa uu leeyahay qaab u gaar ah oo uu u noolyahay.
Laura waxay BBC u sheegtay in iyadu ay biyo ku darto dhiigga ka dibna dhirta ku shubto: "Waan ka xumahay, i cafi, waan ku jeclahay, waana kuu mahadcelinayaa", ayey ku celcelisay markii ay geedaha ku waraabineysay. "Waxaa ii muuqda dhirta oo si qurux badan u baxaysa, nafaqo badanna helaysa," ayey tiri.
Laakiin, marka dhiigga caadada ay wejiga marsaneyso, waxay sheegtay in ay indhaha isku qabsato ayna dhareemeyso in ay mahdineyso ayna "awood dheeraad ah heleyso".
'Awood xad dhaaf ah'
"Mid ka mid ah faquuqa ugu weyn caalamka waa diidmada [ku wajahan dhiigga caadada] iyo ceebta ay dumarka dareemayaan marka uu ku dhaco," ayey tiri.
Caado dhaqameedkan waa "mid aad u fudud, balse awood badan, oo caafimaad ah, haweeney kastana u ah ficil qoto-dheer," Sida ay sheegtay Morena Cardoso oo ah dhakhtar cilmu-nafsi iyo qoraa, taas oo bilowday Maalinta Caalamiga ah ee Bisha Beerashada, sannadkii 2018.
60 sano ka dib saaxiibbo ka badbaaday kacaankii dhaqanka ee Shiinaha
Sannadkii la soo dhaafay, wuxuu arrinkan soo jiitay illaa 2,000 oo qof oo meel fagaare ah ugu dabaaldegay "maalintooda dhiigga caadada".
Sida ay Morena sheegtay, fikradda ka dambeysay munaasabadda waxay ahayd in "dhiigga caadada uusan sababin ceeb, balse uu yahay sharaf iyo awood".
Maalinta xigta ee dabaaldegga waa 4 bisha August.
'Waa shaqada ruuxiga ee haweenka'
Waxay sheegtay Morena, sida uu qabo dhaqanka dadka asalka u ah Woqooyiga Amerika (sida Mexico), iyo Peru, dhiigga waxaa lagu daadiyaa dhulka si uu taran u yeesho.
Wuxuu matalayaa xilliga saaxiibtinimada iyo ruuxda shaqo ee haweenka, iyo farxadda gabdhaha doonaya in la guursado.
Lahaanshaha sawirka Ana Oliveira
Image caption Sannadkii la soo dhaafay, wuxuu arrinkan soo jiitay 2,000 oo qof oo meel fagaare ah ugu dabaaldegay "maalintooda dhiigga caadada".
Balse, waxaa jiro bulshooyiin qaba "fikrad si weyn u diidan arrintan" dhiigga caadada ah, sida ay sheegtay Daniela Tonelli Manica, oo ah dhaqtar cilmu-nafsi oo ka tirsan jaamacadda Unicamp ee Brazil, taas oo 20 sano cilmi baaris ku sameyneysay arrintan.
"Caadada waxaa loo arkaa dhiig aan macno lahayn," ayey tiri, "Waxaa lala mid dhigay sida saxaraada iyo kaadida - arrimo la xiriira musqusha, oo ka fog aragga".
"Isbuuceyga bsiha Caadada wuxuu ii furay indhaha si aan u arko dhulka oo dalag soo saaraya, si la mid ah caloosheena," ayey tiri Renata Ribeiro, oo ku dhaqanka arrintan ka aragtay baraha bulshada.
Lahaanshaha sawirka Sofia Ribeiro
"Waxay ila noqotay in ay cadaalad iyo arrin fiican tahay in dhulka lagu celiyo wixii uu ina siiyay."
Waxay meel isugu geysay dhiigga caadada waxayna ku waraabisay dhir ay iyadu beertay.
Haweeneydan oo hadda 43-jir ah waxay sheegtay in markii ugu horreysay ee caadada ay ku dhacday in loo sheegay "Hadda weli waad yartahay, bil kastana wuu kugu dhici doonaa, qofna yuusan ogaan".
Sahan caalami ah oo lagu wareystay 1,500 oo dumar oo da'dooda ay u dhexeysay 14 illaa 24 sano, ayaa lagu ogaaday sida weli arrintan ay u tahay mid aan laga hadli karin, marka la eego bulshooyiin badan.
Cilmi-baarista oo uu sameeyay Johnson & Johnson waxaa laga fuliyay Brazil, India, South Africa, Argentina, iyo Philippines - waxaa lagu caddeeyay in dumarka ceeb looga dhigo iibsashada bacaha ay caadada u xirtaan, in ay muujiyaan bacahaas iyo xitaa in ay fadhiga ka kacaan xilliga uu ku dhaco dhiigga caadada.
Weli qof kasta diyaar uma ahan inuu dhaqankan aqbalo - Waa sababta ay Laura u bilowday arrintan bishii June ka dib markii ay baahisay sawirkeeda oo ka muuqda iyadoo wejiga marsatay dhiigga caadada.
"Waxaan haystay 300 oo saaxiibo ah, waxaana filayay in uu iska noqdo sawir uun oo aan ku caawinayo dumarka kale," ayey tiri.
Lahaanshaha sawirka Morena Cardoso
Image caption Morena Cardoso also believes the subject of women's periods has to be "demystified"
Afar maalmood ka dib, waxay ogaatay in dhanka Instagram-ka looga soo qaaday weerar culus.
Majaajiliiste muran badan dhaliyay oo reer Brazil ah, Danilo Gentili, ayaa ku sii baahiyay sawirka boggiisa oo 17 milyan oo qof ay ku jiraan wuxuuna ku qoray "dhiigga caadada waa wax jira, balse arrinta xun waxay tahay in wejiga la marsado".
Hadalkaas ayaa si xun looga falceliyay - illaa 2,300 oo qof ayaa si diidmo ah uga jawaabay.
Laura waxay sheegtay in arrintaan ay keliya cadeyneyso wax aan laga hadli karin.
"Dadka waxay la tahay in wixii iyaga aan caadi u ahayn ay yihiin wax aan laga hadli karin. Waxay la tahay in telefoonkooda ay ku qarin karaan oo ereyo xan ah oo naceyb ah ku dhaawacaan qof kale," ayey tiri.
"Waa wax jirkeyga ka soo baxay, aniga ayaana go'aansanaya waxa xun iyo wixii aan xumeyn, maadaama aanan dhibaato ku hayn qof kale noloshiisa."
Abwaan ka hadlay jiilka cusub ee Soomaalida, iyo dhaqanka doorsoomay